Geocon အားဖြင့် Tryst
CBD နေထိုင်မှုအတိုက်အခံ Glebe ပန်းခြံ
next ကိုစီမံကိန်း: High Society
အဆိုပါ Geocon အတွေ့အကြုံ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ | privacy - © GEOCON Group
Grand Central မျှော်စင်
အရှိန်အဟုန်, စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ, Proximity
ဒါဟာချက်များမရရှိခံစားရပေမယ့်သင့်တိုင်းအလိုဆန္ဒမှကု သ. မရသောတဲ့အဆောက်အဦးထဲမှာအားလုံးရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါတယ်ပြောပါတယ်သူကိုနိုငျသလဲ
စေ့စပ်သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လွတ်လပ်မှု, သင့်အစီအစဉ်များနှင့်ချထားသော, စိတ်ကူးပေါ်တွင်သင်၏စားချင်ပေးရဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ Tryst ရဲ့မြို့ CBD တည်နေရာကိုသင်မစိုက်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရဲရင့် monochromatic အတွင်းပိုင်းကိုအလွယ်တကူသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစတိုင်မှအသွင်ပြောင်းနေကြသည်။ သင့်ရဲ့ဧည့်သည်များပန်းခြံနှင့်ထိုမြို့၌တမူထူးခြားတဲ့အမြင်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ထိုခေါင်မိုးပေါ်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာအိမ်ရှင် Play, ဒါမှမဟုတ်ပျောက်ကအားလုံးကိုထံမှ step, ပုဂ္ဂလိက spa သို့မဟုတ်ချွေးပေါင်းအိမ်အတွက်လုပ်ကြဖို့။ တိုင်းအဆင်ပြေဂရုတစိုက်, သင်ကဲ့သို့စတိုင်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာနှစ်ဦးစလုံး၏မာစတာဖြစ်တက်မြေပြင်ကနေစီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Tryst ခေတ်ပြိုင်လူနေမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခေတ်မီအာခေါင်ဘို့ပြင်လွတ်လပ်ခွင့်ပါပဲ။
ပုဂ္ဂလိက spa / ချွေးပေါင်းအိမ်အခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင်နှစ်လိုဖွယ်သာယာအဆင်ပြေမှုများ, မျှဝေအားလုံး 1,2ရက်နှင့်3အိပ်ခန်းတိုက်ခန်းများ, တစ်ဦး shared စားဖိုမှူးရဲ့မီးဖိုချောင်နှင့်ခေါင်မိုးပေါ်ကျန်ကြွင်းကြည့်ရှုနှင့်အတူ, တိတ်ဆိတ်စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုရည်မှန်းချက်ပြိုးထောငျသောသူတို့အားလည်းနက်ရှိုင်းစွာစွဲမှတ်ကြလိမ့်မည်။ Tryst လိုက်ရှာရကျိုးနပ်မယ့်ဆုံရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယူထိုက်တန်တစ်ဦးကအခွင့်အလမ်း။ အောင်ထိုက်တန်တစ်ဦးကမှတ်ဉာဏ်။
ထောင့် Bunda နှင့် Akuna လမ်း, ကင်ဘာရာမြို့တော်
တနင်္လာနေ့ - ကြာသပတေးနေ့မနက်9နာရီ - 5.30pm
သောကြာနေ့မနက်9နာရီ - 9pm
စနေနေ့မနက်9နာရီ - 5pm
တနင်္ဂနွေ 10am - 4pm
အားလုံးပထမဦးစွာနေအိမ်ဝယ်သူများကိုခေါ်ဆိုနေ ... ကျနော်တို့ကအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွက်စတင်ရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ခက်ခဲကိုငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးဖို့ဂတိ။
သင်တို့ရှိသမျှသည်အတူတကွဈေးကွက်ထဲကစျေးနှုန်းနေရှေ့၌သင်တို့ပထမဦးဆုံးအိမ်ပြန်သို့ရဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေယနေ့ Geocon Display ကိုပြခန်းသို့သွားရောက်။
First Home Buyer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ပိုင်ရှင်သိမ်းပိုက်ထားသော
ကိုယ်စားလှယ် AllHomes အွန်လိုင်း AllHomes ပုံနှိပ်ပါ ရုပ်ရှင်ရုံ Advertising ကြော်ငြာ တိုက်ရိုက်မေးလ် ဒိုမိန်းအွန်လိုင်း အီးမေးလ်ပို့ရန်ကြော်ငြာ အဖြစ်အပျက် Facebook က Google က Instagram ကို LinkedIn တို့ ရေဒီယိုကြော်ငြာ လွှဲပြောင်း အရောင်း display ကို ဆိုင်းဘုတ် အဆိုပါကင်ဘာရာ Times သတင်းစာ တီဗီကြော်ငြာ YouTube ကို
ငါ updates များကိုခံယူချင်ပါတယ်.
Accept T က & C ရဲ့ | privacy
အဆိုပါ Geocon အဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမကြာမီအဆက်အသွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်.
Project မှ Downloads
ဒေါင်းလုပ် / link ကို
1 အိပ်ခန်း2အိပ်ခန်း3အိပ်ခန်း4အိပ်ခန်း
နောက်ဆုံးသတင်းများ sign up ပြုလုပ်ပါ
ငါ GEOCON & icon ဟိုတယ်ကနေ updates များကိုခံယူချင်ပါတယ်.